Isticmaal Xirfado Qaar Ka Fogoow Captcha | Martech Zone
Isticmaal Xirfad yar oo Ka Fogoow Captcha
Sabtida, Juun 14, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah waayo-aragnimooyinka ugu xun ee isticmaala ee aan sii wado ku soo galo shabakadda ay tahay Captcha technology.
Captcha waa marka sawir lagu soo saaro lambarro, xarfo, iyo mararka qaarkood ereyo aad u baahan tahay inaad dib ugu qorto goob kale. Tani waa in laga hortago farriimaha otomatiga ah ee qoraalada faallooyinka. Maaddaama ayan kala saari karin koodhka, ma soo gudbin karaan qoraallada been abuurka ah.
Waa farsamo carqalad ah. Kuuma sheegi karo inta jeer ee aan aado inaan soo gudbiyo faallo ama aan farriin ugu diro bogga qaar waxaana iga dhexgalay garoonka Captcha. Waxay joojisaa socodka waxayna joojisaa khibrada isticmaalaha. Ma adkaysan karo. Mararka qaar, si fudud ayaan uga quustaa oo aan u joojiyaa booqashada goobta ama isticmaalka aaladda.
Waxaa soo saaray kumbuyuutar. Xaqiiqda ay ku sameysay kumbuyuutar ayaa ii sheegaysa in maalin uun uu jabin doono kombiyuutar. Waa waqti uun.
Waa caajis. Halkii laga sixi lahaa dhibaatada, waxay ka dhigeysaa isticmaalaha inuu ka shaqeeyo hareeraheeda.
Lammaane dhowr ah ayaa i weydiiyay sababta aan u isticmaali waayey Captcha markii aan qoraayey Faylka Faallooyinka Faallooyinka. Uma aanan isticmaalin maxaa yeelay waxaan doonayay inaan khibrada sameeyo ka fiican, ma xuma, intaad iska ilaalinayso faallooyinka faallooyinka. Iyada oo xoogaa yar oo xariifnimo ah, shirkadaha softiweerku waxay caqabadahaas ka dhigi karaan kuwo madadaalo leh, ee ma ahan carqalad.
Su'aashayda caqabad ku ah aniga page xiriir waa fududahay, "ereyga ugu dambeeya cinwaankeyga". Laakiin waxay ka dhigaysaa qofka inuu fiiriyo ilbiriqsi iyo xitaa xitaa qosol, inay tahay inuu galo "blog". Wanaagsan oo fudud. Looma kala baddelayn, la kala dhantaalay, iskudhafka waraaqaha iyo tirooyinka. Kaliya su'aal fudud oo aan ka jawaabi karin kombiyuutarka - kaliya akhristaha.
Facebook ayaa hadda isticmaalaya Captcha
Shirkadii ugu dambeysay ee dhibane u noqoto teknolojiyadda qaabka Captcha waa Facebook. Kaliya maahan indho indheyn buuxda, waxaad si dhib yar u aqrin kartaa waxa digaagga ah. Facebook wuxuu caan ku ahaa soo saarida aalado qabow iyo isku dhafkooda boggooda… miyay runti ahayd inay adeegsadaan tikniyoolajiyaddan nacasnimada ah? Way ku xun tahay in boodhadhkaas iyo kuwo kale lagu dul iibiyo.
Qaarkood waxay ku doodi karaan "inay shaqeyso". Waxay kaliya ka shaqeysaa ixtiraamka in ay ka saarto dhibaatada bogga oo ay ku dhejiso adeegsadaha. Tani waa naqshad cudurdaar la'aan waxaana jira siyaabo ka wanaagsan! C'mon Facebook… fursad qaata, wax ikhtiraac! Noqo qof hal abuur leh.
Tags: captchadib u qabashada
Blog-Tipping: Cuncun Farsamo
Tani waa abaal-marin, loogu talagalay Boostada ugu Weyn Dunida…
Jul 14, 2007 markay tahay 9:10 PM
Hal xal hal abuur leh oo la mid ah captcha's waa HumanAuth (iyo KittenAuth). Waxay sidoo kale la mid tahay fikraddaada “eraygii ugu dambeeyay ee cinwaankeyga qormada”. Bini'aadamku waa inuu akhriyaa tilmaamaha oo uu caddeeyaa inay fahmayaan macnaha ereyga. Kumbuyuutar ma samayn karo taas, weli. Laakiin haddii aad dhageysato dadka AI, way maqli doonaan, dhowaan! Waxay u dhowdahay geeska, runtii!
Haddii HumanAuth ama wax “heer” ah oo kombiyuutarradu aysan sameyn karin ay qabsadaan oo ay galaan adeegsi baahsan, waxay xoogaa yareyn doontaa carqaladda aad ka hadleyso.
LAAKIIN, weli waa inaad ka taxaddartaa hirgelinta. Muunadda HumanAuth ee aan hadda u tegey oo haddana eegay haddana cillad bay leedahay! Isla marka aad gujiso midigta 3-da sawir, waxay baddelaysaa badhan si ay kuu ogeysiiso inaad saxday. Taasi waa caadi, laakiin waxay ku siineysaa qasabno aan xadidnayn, marka algorithm fudud oo soo noqnoqod leh ayaa si fudud u ogaan kara 3da sawir.
Fikraddaadu way ka fududdahay waana fududahay badanaa waxay ka dhigan tahay wax ka yar oo khalad khaldami karaa.
Jul 15, 2007 markay ahayd 6:57 AM
Kama warqabin HumanAuth iyo KittenAuth… Waxaan eegi doonaa teknoolojiyadaan!
Sep 4, 2007 at 9: 33 PM
Kuuma sheegayo inaad haysatid “sax” si fudud ayey kuu sheegaysaa inaad haysato saddex sawir oo xul ah.
Jul 15, 2007 markay ahayd 5:40 AM
Fikrad xiiso leh, inkasta oo aanan hubin inay u qalanto inay tahay shey u gaar ah blog
Laakiin muxuu qofku sameyn la'yahay xoogaa feejignaan ah… 😉
Sikastaba, bartayada (http://ajaxwidgets.com) uma haysto captcha nidaamkayaga baloogyada. Xaqiiqduna waxay tahay in 99.99% dhamaan boggaga spam lagu diido xaqiiqda fudud ee aanaan ogoleyn HTML…!
Intaa waxaa sii dheer waxaan u isticmaalnaa "cinjirka cinjirka 'cinwaanka URL-ka kaas oo sidoo kale qaada spam badan. Runtii intaas oo dhami kuma adka 🙂
Jul 15, 2007 markay ahayd 6:50 AM
Ujeedkeygu ma aheyn fiiro gaar ah, Thomas. Xaqiiqdii waa in la soo jiito tiknoolajiyad 'aqbalsan' guud ahaan laakiin aan ahayn mid saaxiibtinimo leh.
Tusaalahaaga sida aad ula macaamilayso waa ujeedkeyga, xaqiiqdii waxaa jira habab faragelin yar oo lagula tacaalo dhibaatada.
Mahadsanid, Thomas! Aniguna waan jeclahay aalado, sidaa darteed waan hubin doonaa bartaada!
Jul 15, 2007 markay ahayd 6:45 AM
Waxaad ku guuldareysaneysaa inaad sheegto captcha's kuwaas oo aan aheyn kuwa daallan oo runta ku saleysan qoraalka qoraalka qaabeysan
Kabtanka wuxuu noqon karaa waxyaabo badan, qoraal ku saleysan, su'aal iyo jawaab, mid shakhsiyadeed (soo qaado yar yar) oo kuwani aad ayey uga dhakhso badan yihiin adeegsiga waxayna macno badan u sameynayaan isku dayga lagu ogaanayo inay taasi tahay o ama 0.
Waan kugu raacsanahay, waana necbahay iyaga sidoo kale, laakiin qoraalkaagu xitaa ma daboolin ballaadhka buuxa ee mawduuca, mana dhiibin wax fikrad ah oo ku saabsan sida loo saxo.
Jul 15, 2007 markay ahayd 6:54 AM
Waan ku raacsanahay - ma aanan la imaan xalka ugu fiican… taasi waa waxa aan ugu baaqayo shirkadaha leh ilaha badan iyo khabiirada khibrada isticmaalaha. Dhiirrigelintayda qorista boostada ayaa ahayd kadib markii aan arkay Facebook oo adeegsanaya tikniyoolajiyadan.
Sidoo kale ma aanan ogeyn in tiknoolajiyadaha 'Captcha' ay isku duubnaayeen meel ka baxsan qaabka font graphic ee loo baahan yahay in isticmaalahu soo gudbiyo. Haddii tiknoolajiyada Captcha ay ku sii fidineyso raadkooda su'aalaha caqabadaha iyo jawaabaha la sameyn karo si kor loogu qaado, oo aan hoos u dhicin, waayo-aragnimada isticmaalaha, dhammaantood iyaga ayaan u ahay!
Jul 15, 2007 markay ahayd 7:25 AM
Adeegso magacyada isbeddelaya. Marka isticmaaluhu u yimaado bogga deji cookie fadhiga oo ay ku jiraan lambar aan kala sooc lahayn. Kadib sii sumaddaada "wax ku qor" magac = "faallo __ [cinwaan]", oo sidaas u bixi mid ka mid ah qaybahaaga intiisa kale.
Kadib lambarka dib u dhig markasta oo qof booqdo bogga.
Taasi waxay hubin doontaa inay tahay qof bini aadam ah bogga: muddo yar.
Jul 15, 2007 markay ahayd 7:48 AM
Gebi ahaanba waan kugu raacsanahay. CAPTCHA's waa xanuun ku dhaca the
Si kastaba ha noqotee, runtii way fududahay in la qoro CAPTCHA aan la arki karin oo sameeya khiyaanada. Waxaa jira siyaabo badan oo kala duwan oo loo sameeyo.
Jul 15, 2007 markay ahayd 8:57 AM
Captcha's waa dhibi kartaa. Qaar ka badan kuwa kale. Waxaan arkay qaar aan macquul aheyn in la aqriyo (taas oo jabineysa ujeedka). Waxaan isticmaalaa nooca "xun" ee Captcha ee aad ku sharaxday dhowr mashruuc. Si kastaba ha noqotee, waxaan u fududeystaa akhrinta si aadanuhu uusan ugu qasbin maskaxdiisa / maskaxdeeda inuu macno u yeesho. Sidoo kale, waxaan kaliya "captcha" marka isticmaalaha isdiiwaangaliyo, maahan waqti kasta oo ay ku biiriyaan goobta. Ma aha nidaam kaamil ah, laakiin waxaan u arkaa inay ku hooseyso qodobka xanaaqa aadanaha.
Halkaas ayaad tagtaa, waxaan bilaabi karnaa inaan ku qiimeyno 'Captcha's' iyaga "HAF" (Xanaaqa Xanaaqa Aadanaha), Isir xumida Isir xumida, iwm.
Jul 15, 2007 markay ahayd 9:13 AM
Captcha iyo HAF. Waan jeclahay taas!
Jul 15, 2007 markay tahay 12:19 PM
Ma doonayo in aan yareeyo sheybaarkaaga laakiin waxaa jira dariiq aad ufiican oo lagu shaandheeyo spam ku jira wordpress. Waxaa jira qalab layaableh oo aan isticmaalo oo loo yaqaan 'SpamKarma' waxaanan u adeegsadaa dhammaan noocyada kala duwan ee dhirta si loo go'aamiyo haddii qoraalkani yahay mid bani'aadam ama inuu yahay spam. Waxaan u isticmaali jiray ilaa 1 1/2 ama 2 sano hada marna waxay ku muujisay qof ra'yigiisa inuu yahay spam marna ma hubin sidaa darteed waxay waydiisatay qofka inuu buuxiyo captcha ka dibna u sii daa faallooyinka. Waxay qabataa boqolaal faallooyin spam ah usbuucii inkastoo waligoodna aan loo oggolaanaynin.
Sidoo kale waan necbahay captchas. Haddii aan runtii u baahdo inaan qoro captcha waxaan u sameyn lahaa sida oo kale http://www.hotcaptcha.com/ maaddaama laga soo xulayo dadka quruxda badan ama xayawaanka dhogorta leh ama waxa ka soo baxa sawirro isdaba-joog ah waa wax aan fududayn bina-aadamka oo aad ugu adag qoraallada otomaatiga ah.
Jul 15, 2007 markay tahay 12:28 PM
Ma isticmaalo SpamKarma laakiin waan maqlay. Anigu waxaan adeegsadaa Habdhaqan Xun waxaana u badan tahay inaan kaliya la macaamilo 10% faallooyinka faallooyinka ee aan horey u haystay.
Waxaan eegi doonaa Hot Captcha - codadka la midka ah waxa aan jeclaan lahaa inaan arko.
Jul 15, 2007 markay tahay 12:23 PM
Qoraalkani waa mid aan micno lahayn. Xalkaagu ma cabiro. A "bot" ayaa si fudud loo qorsheyn karaa si looga gudbo cabirkaaga amniga adoo buuxinaya "blog" mar kasta. Xalku wuxuu leeyahay tiro su'aalo ah oo xadidan - su'aalo badan oo aad danaynayso inaad qorto. Sidee ayuu facebook, tigidhada tikidhada, ama yahoo u fulin lahaa xalka noocaas ah?
Qoraalkani wuxuu ahaa mid qosol ku filan si loo helo xoogaa feejignaan ah oo kor loogu qaado dakhligaaga xayeysiinta. Waxaad u baahan doontaa inaad isku daydo si ka sii daran sidii aad "ugu soo gudbin lahayd" balooggan. Waxaan ku bilaabi lahaa nuxur mudan in la akhriyo.
Jul 15, 2007 markay tahay 12:34 PM
Wow, Matt. Qof ayaa maanta u dhawaaqaya wax yar oo ciil ah.
Waxay u egtahay inaadan dhab ahaan akhrin qoraalkayga. Marnaba ma dhihin xalkaygu wuu miisaamayaa sidoo kale ma ahan inay adeegsadaan shirkadahaas. Aniga sameeyey waxaad dhahdaa waxaan jeclaan lahaa inaan arko shirkadaha qaar (sida Facebook) oo la imanaya xal xeel dheer. Qalabkeygu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad beddesho su'aasha caqabadda ah oo aad ka jawaabto markasta oo aad jeceshahay - bot-ka ma sii socon doono taas. Ilaa maanta, wax SPAM ah kuma lihi boggeyga xiriirka ee xalkaan.
Hal tusaale: Waxaa laga yaabaa in Facebook uu si dhab ah uga faa'iideysan karo adeegsiga xayeysiinta ku taal bogga oo uu weydinayo "Xayeysiinta yaa ku yaal boggan?". Wax kastaaba way ka fiican yihiin feerista tiro tiro iyo xarfo ah - haddii aad dhab ahaantii akhrin karto.
Farxad! Hubso inaad iska qorto! hehe
Jul 16, 2007 markay ahayd 9:12 AM
"Xayeysiiska yaa ku yaal boggan" waa fikrad xiiso leh. Hore ayaan u arkay iyada oo laga hirgaliyay degel la yiraahdo Moola.com. Si kastaba ha noqotee, waxay u isticmaalaan si gaar ah hab lagu toosinayo dareenka xayeysiiyayaashooda (sida isdhexgalka) halkii laga isticmaali lahaa habka ka hortagga spam.
Qaar iyaga ka mid ah xitaa waxay kugu qasbi doonaan inaad daawato 20 ilbidhiqsi fiidiyoow ah kadibna ay ka jawaabaan su'aal sida "Shirkaddee ayaa xayaysiiskan loo samaynayay?" In kastoo, aanan taageere u ahayn habkaas gaarka ah (Waan necbahay inaan sugo), waxay noqon laheyd mid xiiso leh in la arko waxa wax u eg ee ku dhaca dakhliga xayeysiinta
Jul 15, 2007 markay tahay 4:30 PM
Marka laga reebo cunsuriyada xanaaqa, taas oo ah mid aad u weyn, CAPTCHAs si joogto ah looma geli karo qof kasta oo leh aragti ka yar.
Qiyaas CAPTCHA oo ay kugu adkaato inaad aqriso ka dibna u oggolaato qof aragti liita inuu tago. Dhibaato? Ku dhowaad macquul maaha.
Ka waran qof aan aragti lahayn gabi ahaanba, oo ku faafinaya shabakad akhristaha shaashadda ama farsamada indhoolayaasha. CAPTCHA waxaa loo sameeyay sida barnaamijyada aysan u akhriyi karin. Xaaladdan oo kale, adeegsadaha naafada ahi sidoo kale ma noqon doono.
Waxaa jira wax yar oo CAPTCHA ah oo la heli karo, kuwa ay ka mid yihiin cod CAPTCHA oo loogu talagalay dadka aan arki karin ayaa tusaale ah, laakiin welwelka isticmaalka ee dheeraadka ah ayaa ka dhigaya tiknoolajiyad aan waligey tixgelin doonin hirgelinteeda. U garaac spammerska si kale, ha ka dhigin kuwa isticmaala dhabta ah inay lacag bixiyaan (sidoo kale sababta aan u isticmaalo fiilada dofollow)
Jul 15, 2007 markay tahay 8:43 PM
Captchas ma xuma. Qabsashada xun ayaa xun. Haddii ay aad u adag yihiin in la ogaado oo aadan akhriyi karin, markaa taasi way xun tahay.
Si kastaba ha noqotee waxaan u maleynayaa in xalka ugu fiican uu yahay su'aal aasaasi ah oo xisaab ah, saddex doorsoome:
1. Lambarka 1 (0-9)
2. Lambarka 2 (0-9)
Waa la qabtay sidaa darteed xisaabtu waa mid aad ufudud, waxaadna ogaan kartaa waxa jawaabta ka soo baxa marka loo fiiriyo qoraalka halkii si fudud.
Jul 16, 2007 markay ahayd 9:13 AM
Hal xal nadiif ah oo aan kula kulmay meel waxay ahayd sanduuq calaamadeysan oo ah "Waxaan ahay spammer", kaas oo ku yimid si aan caadi aheyn loo kormeerin. Waa la siiyay, way ka faa'iido badan tahay macnaha guud ee kahortaga isdiiwaangelinta otomaatiga ah marka loo eego faallooyinka (maadaama faallooyinka barta intabadan aysan lahayn sanduuqyo hubin u baahan hubin)
Dabcan aakhirka waa waqti uun kahor in AI ay jabiso taas. Laakiin uma maleynayo inay jirto xal kaamil ah aalado aan waligood jabin doonin, marka tani way wanaagsan tahay mana carqaladeynayso waayo-aragnimada isticmaalaha gebi ahaanba (mooyee, dabcan, inaad isku aragto inaad tahay spammer unless)
Jul 16, 2007 markay ahayd 9:18 AM
Maxaa ku jira faallooyinka xun ee ku saabsan tan oo ah "fiiro gaar ah" Tan iyo goorma ayey ahayd wax xun in codkaaga lagu daro dooda. Heck, oo leh faallooyin 17 horeyba, waa iska cadahay mowduuc ay dadku xiiseynayaan.
Ka sokow, haddii kani yahay mowduuc soo jiita dareenka dadka, maxaad u doonaysaa '_naa_ma rabin inaad wax ka qorto?
Jul 17, 2007 markay ahayd 11:34 AM
Sidee ayaanay CAPTCHA u ahayn?
Run, maahan xarfaha mangardada caadiga ah ee muuqaal dabiici ah, laakiin waa wax isku dayaya in loo kala sheego kumbuyuutarka iyo aadanaha.
May 20, 2008 at 10: 55 AM
Haa, waan ku raacsanahay in captchasku ay yar xanaaqayaan, waana ka xumahay inaan ogaado inay caqabad ku yihiin dadka isticmaala naafada ah, laakiin waxaan dhawaan uun
ducaystay ku saabsan sida aan uga mahadcelinayo labada dabeecadood ee nidaamka reCaptcha, ee ah inuu xannibayo spam (in kasta oo aan 100% si wax ku ool ah, sida aad tilmaantay) iyadoo laga caawinayo qeexidda buugaagta, welina waxaan ahay taageere.
Wax muran ah kuma lahan saameynta ay ku reebi karaan khibrada isticmaale, laakiin waa inaad qirataa inaad adeegsaneyso dadaalka ugu yar ee xubin kasta oo ka mid ah baaxad weyn oo bini'aadam ah si aad u sameyso waxa xitaa kombiyuutar aad u maskax badan uusan aqrin karin (akhri qoraalka mangled ee diidaya Aqoonsiga Astaamaha Muuqaalka) xalka
In kasta oo aan si guud u hadlo, haa, waxaan u wada ahay isticmaalka hal-abuurka halkii aan ka isticmaali lahaa koodh markii ay suurtagal tahay.
Feb 15, 2009 markay ahayd 6:59 PM
Qoraal kooban oo kooban. Anigu, sidoo kale, kuma raacsani dabka ololaya ee ku saabsan ujeeddadaada suurogalka ah. Gaar ahaan halka dadka kale tilmaamayaan inaad bixin weydo "jawaab" ama "badal" ah, oo aan ku dhaaran karay inaad ku samaysay foomkaaga faallooyinka ah iyo ka doodista boggaaga xiriirka (ama waxbaan seegay? 😉 Waxaan u maleynayaa in dad aad u tiro badan Samee fikrado (oo la wadaag) adigoon ku mashquulin inaad aqriso xitaa qoraal gaaban, sida kan, ka hor inta aysan dusha ka saarin (oo fuliya wax aan waxba ahayn)
Tani waa dood xiiso leh, oo aan loo eegayn in xal la macaashay, mudan in wax laga qoro haddii aad rabto. Waa bartaada, intaas kadib iyo - kani waa waxa aniga aad ii dhibaya ee ku saabsan faallooyinka qaarkood - tan iyo goorma ayaa balooggu noqday mas'uuliyad dadweyne? Haddii aad rabto inaad wax ka qorto, wax ka qor. Qofkasta oo aan rabin inuu wax akhriyo wali wuxuu heystaa ikhtiyaar uusan u aqrin. Haddii aad lacag bixinayso, tani waxay noqon lahayd sheeko ka duwan, laakiin, haddii aan sax ahay, degellada internetku waxay ka dhasheen rabitaanka tirada badan ee ah in la dhajiyo wax uun iyo / ama wax kasta oo madaxooda ku soo dhaca oo loo dhigo si loo soo bandhigo dadweynaha, ama si loo fududeeyo la wadaagista asxaabta. Waxyaabo badan oo ka mid ah baloogyada internetka ayaan si guud loo heli karin ama xitaa xiisaha u leh kuwa aan toos ugu lug lahayn.
Waxay ahayd inaan qoslo markaan aqriyay isticmaalka boostadan si aan ugulaabo dakhligaaga xayeysiinta. Waxaa laga yaabaa (oo waxaan rajeynayaa sidaas) khibradaada ayaa iga fiicneyd tayda, laakiin - illaa aad ka dhigatid baloog si aad kor ugu qaaddo wax soo saar - waad ka qori kartaa wax ku saabsan captcha ama waad wax ka qori kartaa sida cunnada eyda guud ahaan u uraya ay u tahay iyo nidaamkaaga xayeysiinta macnaha guud leh ku bixi heerkeeda caadiga ah ee aan la saadaalin karin xaalad kastoo jirta 😉
Intaas marka la dhaho, hadii dadka sameeya CAPTCHA wax akhriyaan, waad ku mahadsantahay inaad ku dartay codka! Meel madow oo madow oo leh giraan cad oo gorgor cad ah (oo si weyn u qalloocan) waraaqo lagu dhajiyay (mararka qaarkood dusha sare ee sawirka) waa tusaale fiican oo xaalad ah in bini'aadamka oo leh aragti macquul ah oo macquul ah ay ku adkaato inuu qeexo, laakiin a barnaamijka u badan tahay in si fudud lagu xallin doono waqti ka dib.
Kaliya xirmooyinkayga 2,
Hambalyo wanaagsan adiga,